Nkwado Pụrụ Iche Nkwado iji Gbaa Azụmaahịa Na-aga nke Ọma
atụmatụ » Nkwado nkwado
Ọtụtụ mgbe anyị na-anụ akụkọ ndị agha - ma ha bụ ndị njikwa ezumike ezumike buru ibu ma ọ bụ ndị na-arụ ọtụtụ ụlọ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ aparhotels - na ha dị ugbu a PMS or Onye njikwa Channel ahapụ ọtụtụ ihe. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ nwere ike ọ gaghị abụdị enweghị atụmatụ ha na-ewe iwe maka ya, kama ọ bụ ọkwa nkwado ha na-enweta.
Site na ndị na-eweta ngwanrọ na-ebugharị onyinye ha na igwe ojii, ọbụnadị ọzụzụ bụ isi esiwo na windo si na ọtụtụ oge pụọ. Ọ bụ ezie na a na-akpọkarị onyinye dị ka SaaS (Software dị ka Ọrụ), ihe ọrụ ahụ yiri ka ọ na-efu n'ọtụtụ ọnọdụ. Nkwado na-aga n'ihu nwere ike ịbụ ihe na-adịghị ike ma ọ bụ na-adịghị adị, yana mmekọrịta gị na onye na-eweta ngwanrọ nwere ike ịhapụ gị ụtọ uto. Nke a bụ ikpe karịsịa mgbe nzaghachi na njirimara ma ọ bụ arịrịọ maka imeziwanye usoro a na-ezute na nlelị, mpako, na mpako.
Kedụ ka Zeevou's Premium Nkwado Enyemaka?
Na Zeevou anyị maara nke ọma na dịka ngwaahịa nke na-egbukepụ egbukepụ dịka anyị nwere ike mepụtara, ọ baghị uru nye ndị na-eweta ile ọbịa ọ gwụla ma ọ gbakwunyere Nkwado Nkwado. Nke a bụ ya mere anyị ji raara onwe anyị nye iji hụ na mkpa nke ihe niile anyị Ndị ọkachamara zutere. N'ihi nke a, na-esote ịdebanye aha onye ọ bụla Patron na-ekenye Onye njikwa ihe ịga nke ọma Onye Mmekọ, onye na-arụ ọrụ dị ka njikwa akaụntụ ma na-adịkarị mgbe niile iji nye nkwado na nduzi maka otu esi enweta ọtụtụ ihe na Zeevou, ọbụlagodi ịgbaso mbido na trainig oge.
A na-eme uzu nke Zeevou otutu oku vidiyo, rue mgbe ị chere na ị matala usoro ahụ ma nwee obi ụtọ ịga n'ihu na-eji ya n'onwe gị. Ọbụna karịa nke a, ọ dịghị mgbe ọ siri ike anyị iru. You nwere ike ịkpọtụrụ Onye Njikwa Ihe Nlekọta Onye Mmekọ gị na WhatsApp maka ajụjụ ọ bụla, ma nwee ike ịkọ nkịta ma ọ bụ nyefee arịrịọ maka atụmatụ ọhụrụ site na Zeevou site na isingzụ Aka.
Nzukọ ndị ọbịa anyị na-enwe kwa ọnwa bụkwa ohere magburu onwe ya maka ịnye nzaghachi gị na atụmatụ anyị wepụtara na nso nso a. Ọzọkwa, ị nwere ike inye echiche gị maka atụmatụ ndị ịchọrọ ịhụ ka a na-arụ ọrụ ha n'ọdịnihu. Anyị na-a nzaghachi n'ime akaụntụ ka mma anyị na ngwaahịa na àjà, na Hazie anyị ụzọ ntanetị n'iburu ya n'uche.
Ndị otu anyị maara na ihe ịga nke ọma anyị bụ naanị maka ihe ịga nke ọma nke ndị ọbịa anyị, yabụ anyị niile gbalịsiri ike igbo mkpa gị dịka anyị nwere ike. Y’oburu na anyi puru inyere gi aka inwe oganihu, anyi ga-enwekwa ihe ịga nke ọma, ma anyi nwere ike iwekọta ọnụ Ntughari Ntughari Ntughari!